Isbeddelka Maareynta Sare ee UPS | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica1 AmericaIsbeddelka Maareynta Sare ee UPS
25 / 03 / 2020 1 America, America, DUNIDA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels
isbedelka maamulka sare
UPS (NYSE: UPS) Guddiga Agaasimayaasha ayaa shaaciyay in laga bilaabo Juun 1, Carol Tomé loo magacaabay inuu noqdo Maareeyaha Guud ee UPS (Maamulaha Guud). David Abney, oo hadda ah sii haya xilka Guddoomiyaha iyo Maareeyaha Guud, ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha laga bilaabo 1da Juun. Abney, oo ka fariisan doona UPS Agaasimayaasha Agaasimayaasha bisha Sebtember 30, ayaa sii wadi doona inuu u noqdo lataliye khaas ah illaa dhamaadka 2020 si uu si habsami leh uga gudbo xilliga kala guurka oo uu si guul leh u dhammaystiro xilli mashquul ah; Dhamaadka muddadan, wuxuu ka fadhiisan doonaa shaqadiisa isagoo dhammaynaya 46-sano oo mustaqbalkiisa UPS ah. Laga bilaabo Sebtember 30, Madaxa Madaxa UPS Madaxa U Sareeya William Johnson wuxuu u shaqeyn doonaa Madaxa Sarkaalka Fulinta ee Fulinta.
Johnson, oo sidoo kale ah u magacaabista UPS Magacaabista iyo Madaxa Guddiga Maamulka Maamulka iyo Xubin Gudiga Fulinta, ayaa yiri, "Kadib qaabab adag oo xulasho ah oo ay ku jiraan musharixiinta gudaha iyo banaanka shirkadda, waxaan go'aan cad ka gaarnay gobolka Carol. Sida mid ka mid ah hogaamiyaasha aadka loo ixtiraamo ee hibada u leh adduunka ganacsiga Mareykanka, Carol waa magac la hubo oo horseed u ah koritaanka adduunka, sare u qaadista qiimaha saamileyda, horumarinta kartida iyo si guul leh u hirgelinta mudnaanta istiraatiijiyadeed. ”
“Carol, oo xubin ka ah guddiga ahna guddoomiyaha guddiga kormeerka, waxay aqoon qoto dheer u leedahay nooca ganacsiga, istaraatiijiyadda, iyo shaqaalaha UPS, waana maamulaha ugu habboon ee ku hoggaamin kara shirkaddan geeddi-socodkan muhiimka ah,” ayuu yiri Johnson. Waxaan ugu hambalyeynaynaa David shaqadiisa aan caadiga aheyn ee UPS. Wuxuu qaaday tillaabooyin geesinimo leh si kor loogu qaado UPS xagga sare ee warshadaha gaadiidka, wuxuuna ku guuleystey inuu shirkadda u meeleeyo mustaqbal guul leh isagoo awood u siinaya isbeddelada soo kordha ee shabakadda caalamiga ah ee shaqaalaha iyo shaqaalaha. ”
David Abney wuxuu yidhi, “UPS waxay waligeed ahayd mid ka mid ah hamigeyga noloshan, oo waxaan ugu mahadcelinayaa UPS, waxaan ku riyooday Mareykanka. Waxaan ku hanweynahay inaan u diyaariyey shirkaddan aadka u wanaagsan 100ka sano ee soo socota, anoo la shaqeynaya qoyska UPS. Waxaan ku kalsoonahay in kooxda maareynta UPS ay mustaqbalkeena u wadi doonaan istaraatiijiyadda mustaqbalka kartida ay leeyihiin. Hadda waa waqtigii aan ku wareejin lahaa calanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay warka ku saabsan magacaabidda Carol; Waan ogahay inuu yahay qofka ugufiican ee maamula shirkadan. Waa hogaamiye istiraatiiji ah oo leh maskax garanaya dhaqanka iyo qiyamka UPS isla markaana marwalba siiya macaamiisha ah mudnaanta koowaad. ”
U diyaar garowga inay la wareegaan jagada madaxa fulinta, Carol Tomé ayaa tidhi: “Waxaan sugayaa inaan la kulmo himilooyinka macaamiisheenna iyo saamilayda annigoo la shaqeynaya kooxdeenna maaraynta kartida leh iyo 495.000 shaqaale ee shirkadeena iyo sii wanaajinta nafteena. David wuxuu ku dhaqaaqay nidaam isbadal aan caadi ahayn UPS; Waxaan qorsheynayaa inaan ku daro kuwa cusub guusha uu gaadhay. Iyada oo la raacayo dhaqanka hodanka ah ee UPS iyo ka go'naashaha aan ka lahayn qiimaheeda, waxaan sii wadi doonnaa inaan ku hogaansanno warshadaha oo aan ku kobcinno aasaaska adag ee shirkaddayada. ”
Carol Tomé, oo ah maamulaha 113-aad ee UPS, oo ku jirtay taariikhda 12-sano, waxay xubin ka ahaan jirtay xubin ka tirsan Guddiga UPS illaa 2003, sidoo kale waxay u shaqeysay sida Gudoomiyaha Gudiga Ilaalinta. Tomé, oo horey u soo noqday Madaxweyne kuxigeenka iyo CFO ee Home Depot, waa shirkadda ugu weyn ee alaabada tafaariiqda ku leh Mareykanka, oo leh 2.300 laamood iyo 400.000 shaqaale, wuxuu qaatay mas'uuliyadaha istiraatiijiyadda shirkadda, maalgelinta iyo horumarinta ganacsiga, wuxuuna CFO u shaqeeyey 18 sano. Muddadii, waxay ku kordhisay kororka qiimaha saamiga 'Home Depot' boqolkiiba 450.
Intii lagu jiray muddadii hoggaanka ee Abney, oo loo magacaabay inuu noqdo Maamulaha Guud ee 2014 iyo sidoo kale Guddoomiyaha Golaha 2016, UPS;
Waxa intaa u dheer in ay kordhisay soo rogitaankeeda 27% iyo macaashka saafiga ah qiyaastii 50%, waxay sidoo kale kordhisay dakhliyada saamigeeda qiyaastii 60%.
Iyada oo la adeegsanaayo saamiyo iyo wadaagid, waxay keentay in ka badan $ 29 billion saamiyadeeda.
Iyada oo la hirgalinaayo barnaamij sanado dhowr ah oo isbedello ah oo mudnaanta istiraatiijiyad koritaanka istiraatiijiyadeed loo dejiyey, awoodda hawlgalka Mareykanka ayaa si weyn kor ugu kacday sanadka 2019.
Waxay sare u qaadday awoodda shabakadeeda adduunka illaa heer aad u sarreeya, iyada oo ku guuleysatay in ka badan 2019 milyan tirooyinka gaarsiinta baakadka maalin kasta ee 32 inta lagu gudajiro xilliga ugu sarreeya.
Markii la bilaabay UPS Flight Forward, waxay heshay rukhsad buuxda duulimaadkii ugu horreeyay ee ay sameyso diyaarad Drone ah oo ka socota FAA.
Waxay kordhisay kala duwanaanshaha shirkadda iyadoo la beddelayo qaab dhismeedka Guddiga Agaasimayaasha iyo kooxda maamulka sare.
Abney, oo horay u soo noqday Madaxweyne Kuxigeenka Hawlaha (COO) ilaa 2007, wuxuu maarey howlo saadka, joogtaynta iyo injineernimada, iyo sidoo kale dhammaan heerarka shabakadaha gaadiidka UPS. Kahor doorkiisa COO, wuxuu u horseeday dadaallo istiraatiiji ah oo lagu kordhinayo awoodda shirkadda ee awoodda saadka ee caalamiga ah sida Madaxweynaha UPS International. Wuxuu sidoo kale ku lug lahaa waxbadan oo caalami ah oo ay ku midoobeen intii uu ku jiray xirfadiisa sida Coyote, Marken, Shirkadaha Fritz, Sonic Air, Stolica, Lynx Express iyo Sino-Trans ee Shiinaha. Markii uu xirfadiisa ka bilaabay UPS 1974 isagoo sii waday waxbarashadiisa jaamacadda Delta State University, Abney wuxuu bilaabay markii ugu horreeyay inuu ka shaqeeyo sidii gacan hayaha xirmada xirmada yar ee Greenwood.
Muhittin Shimshek oo ka tirsan Maareynta TCDD
Darawalada UPS mar labaad ayay shaqo joojinayaan
UPS ayaa ku yaboohay garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Isbeddelka Dhismaha Dhismaha Palandöken
Labo isbeddel oo muhiim ah oo ku yimid jidadka tareenka ee xawaaraha sare ee Bursa
Mashruuca Tareenka ee Isbeddelka ee Eskisehir
'Isbedelka xiisaha' ee mashruuca Tareenka Eskişehir
Isbeddelka wadada gaadiidka dadweynaha Taksim